ULaura Mas. Ingxoxo nomlobi weLa maestra de Sócrates | Izincwadi Zamanje
Izithombe: (c) Ana Portnoy. Ngokuzithoba kukaLaura Mas.
ULaura Mas Uvela eziqhingini zaseCanary ngokuzalwa. Isiqu ku- I-journalism, uhlanganyele emithonjeni yezindaba ehlukahlukene futhi futhi ungumphathi wezincwadi. Umlandeli wezinkondlo, manje wenze ukweqa waya ezincwadini ngenoveli yomlando yohlobo lomlando, Uthisha kaSocrates. Ngibonga kakhulu isikhathi sakho nomusa wakho ngalokhu ingxoxo ukuthi unginikile.
I-LAURA MAS - UKUXOXA
UMBHALO WAMANJE: Inoveli yakho yokuqala ezincwadini ethi Uthisha kaSocrates. Kusitshelani?
LAURA MAS: Inoveli yami iyalandisa uchungechunge lokuhlangana phakathi kukaDiotima noSocrates lapho uthisha efundisa umfundi incazelo yangempela yothando. Ngasizwa isidingo soku sindisa isibalo sikaDiotima, umfundisikazi nesazi sefilosofi okungekho lutho okwaziwayo, kepha okuvela ku- Idili kaPlato njengowesifazane oguqukayo futhi ocacile. Imibono yakhe yagqugquzela umqondo wothando lukaPlato, okusho ukuthi incazelo yalo yangempela ikude kakhulu nale yamanje.
LM: Enye yezincwadi zokuqala engizifundile kwaba INkosana encanengu-Antoine de Saint-Exupéry. Kwakuwuhlobo olunezithombe engalunikezwa ubaba futhi engangilifunda njalo. Ngaphambi kokuqala ukubhala inoveli, ngangifanele izinyathelo zami ezincane ukubhala ezinye izindaba nezinkondlo yamamagazini kanye nama-anthologies.
AL: Yisiphi isihloko esakushaya futhi kungani?
LM: Ngesikhathi ngisemusha, kwangimaka kakhulu Usizi lukaWerther OselulanguGoethe. Intshisekelo nokuzwela komlingiswa wayo kwangithinta ngokujulile, ngoba ngaleso sikhathi ngangisemncane futhi ngidabukile othandweni.
AL: Umbhali oyintandokazi? Ungakhetha ngaphezu kweyodwa nakuzo zonke izinkathi.
LM: UMarguerite I-YourcenarU-Albert elimile, URobert amathuna, Clarice ULispector… Uhlu luzoba lude kakhulu. Ababhali abathathu besikhathi samanje abangakaze bangiphoxe nguLorenzo U-Olivan, Chantal Maillard noLuis Garcia Montero.
I-LM: Kuningi kakhulu ... Ukube bekufanele ngihlale noyedwa, nakanjani bekungaba yinkimbinkimbi futhi kungavumelani U-Emma bovary owadalwa nguFlaubert.
LM: Ku bhala Ngidinga ukuba ngedwa futhi ngivame ukugqoka umculo we-classic yabaqambi abakhulu abanjengoBach, Chopin noma uDebussy. Kuyangisiza ukukhipha ingqondo yami futhi kwenza ukubhala kwami ​​kugele kangcono. Esikhundleni salokho, ngiya ngokuya ngidinga i- ukuthula ngesikhathi sika i-leer futhi ngithanda ukukwenza ngiphuza inkomishi yetiye noma ikhofi, enwetshiwe kusofa noma embhedeni nasenkampanini yamakati ami.
LM: Indawo engcono kakhulu yokubhala nokufunda phansi kwami. Lapho ngithola ukuthula nokuphumula okudingekayo ukuze ngibalekele ingqondo futhi ngigxilise ingqondo. Ngesikhathi se- bhala, muva nje ngincamela ukusizakala ngamahora emini; Ngaphambi kokuba kube sebusuku impela, kepha manje ngibeka inqubo yokubhala yansuku zonke eqala ihora lokuqala ekuseni. Esikhundleni salokho, ngagaya phansi i-leer kusukela ngehora lesithupha ntambama futhi kwesinye isikhathi banganginika okuningi uma incwadi ingibamba.
I-LM: Ngaphandle kohlobo lomlando, ngiyayithanda kakhulu i- ukuhlolwa, lo biography futhi, kunjalo, izinkondlo.
I-LM: Ngokwesincomo somhleli wami, uMiryam Galaz, njengamanje ngifunda Izinsuku zeCaucasusnguBanine. Ngisezinhlelweni zokubhala inoveli yami yesibili, ezoba yisasasa lomlando elinamaqhinga amaningi esigodlweni.
LM: Ngicabanga wonke umuntu singahlala nemfundiso ethile eyakhayo ngenxa yalolu bhubhane, yize sibhekene nesikhathi esiyinkimbinkimbi kakhulu kuwo wonke amazinga. Ngicabanga ukuthi, ngandlela thile futhi yize ngingazi kahle ngakho, njengoba ngibhala inoveli yomlando, imizwa yami kanye nokuhlangenwe nakho kwami ​​kubonakala kumagama ami.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » ULaura Mas. Ukuxoxisana nombhali wencwadi ethi The Teacher of Socrates